Calaamada Maska (The Caduceus, The Rod of Asclepius & The Ouroboro) - Land Of Punt
Astaanta Maska waxaad ku dhex arkaysaa meelo farobadan oo bulshada kulmiya waxaana loo turjuntaa siyaabo kala duwan. Astaanta Maska iyo kuwakale ee ay iskumidka yihiin waxaad ku dhex arkaysaa oo ugu weyn haayada caalamka ka dhaxaysa ee caafimaadka “World Health Organisation”, iyo farmasiiyada “Rod of Asclepius”. Meelokale oo ubadan amuuraha caafimadka halmaala, shirkaha waa weyn ee dunida ka jira sida NASA, hayadaha militariga mareekanka “Medical corps” iyo ururada hadafka qarsoon leh ayaa isticmaalaha oo bulshada kusoo dhextuura.
Dhaqanka khuraaflayasha “Pagan cultures” markaynu eegno maska waxaa looga yaqaan inuu barakaysan yahay siyaabo kaladuwan waa looso caabudi jray. Ogow oo hadii aad taswiirtooda aad qaadatid astaana ahaan aad u isticmaashid waxaa xusaysaa jiritaanka maskan karaamada leh oo aad weynaynay. Dhinacooda maska wuxuu utaagan yahay dibu dhalasho, roob, dibu curasho, difaaca jinnka “Ibliiska”. Waxay ka aminsanyihiin inuu yahay isku xidhaha dunidan aynu joogno kunool iyo dunida arwaaxda. Wuxuu ilaaliya khasnadaha dhulka iyo cilmi sirta ku duugan inkasoo aananba garanayn siday u aminayaan misna amuuraha ayey ka aminsanyihiin maska.
Wakhtigii Sameeriyanka ee baabiloon maska iyo astaamihisa aad baa looga yaqaanay lana xifdiyi waxaanay uyaqaanen NINGISHZIDA waxayna ka hoosgalijireen cudurada iyo xanuunada kalajaadka ah ee dadka ku dhaca.
“The serpent on the cross lifted up by Moses in the wilderness to heal the Israelites of their sickness” [Num. 21:9.] Bible
asclepius farmasi MAS ouroboro WHO Snake